ပြင်သစ်Télévisionsက Woody in2it ကိုနိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်အတွက်ကင်မရာထိုးခြင်းကိရိယာအဖြစ်ရွေးချယ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားနိုင်ငံရပ်ခြားကွန်ယက်အတွက်ကင်မရာကိုစားသုံးမိပါက tool အဖြစ်ဒါရိုက်တာ Woody in2it ရွေးကောက်
ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားနိုင်ငံရပ်ခြားကွန်ယက်အတွက်ကင်မရာကိုစားသုံးမိပါက tool အဖြစ်ဒါရိုက်တာ Woody in2it ရွေးကောက်
စီမံကိန်းမန်နေဂျာ at ဒါရိုက်တာ Woody Technologies က
Aurélien Brelle အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားနိုင်ငံရပ်ခြားကွန်ယက်အတွက်ကင်မရာကိုစားသုံးမိပါက tool အဖြစ်ဒါရိုက်တာ Woody in2it ရွေးကောက် - စက်တင်ဘာလ 7, 2015
ဒါရိုက်တာ Woody in2it မကြာမီပင်လယ်ရေကိုဖြတ်ပြီး 50 ကင်မရာထည့်သွင်းသည့်စက်ပေါ်ချထား
ပထမဦးဆုံးပြင်သစ်တီဗီထုတ်လွှင့်သည်၎င်း၏ပင်လယ်ရပ်ခြားကွန်ရက်က "Outre-မဲ Premier" နှင့် "ပြင်သစ် O" မိမိတို့၏၏ Workflows မှပိုကောင်းကိုက်ညီသောကင်မရာကိုစားသုံးမိပါက tool များအတွက်ဒါရိုက်တာ Woody in2it ရွေးကောက် 10 က်ဘ်ဆိုက်များ.
စွမ်းအားဖြင့် ဒါရိုက်တာ Woody Technologies က နှင့်သတင်းထောက်များနှင့်အော်ပရေတာထံအပ်နှံ, ဒါရိုက်တာ Woody in2it ပြီးသားပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားအဖြစ်အသစ်ကအသုံးပြုခဲ့သော Panasonic က P2 ကင်မရာများများ၏ပုံစံများကိုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ် Sony က XDCAM ကင်မရာများသည်လက်ရှိတွင်ချထား။ ဒါဟာအပေါငျးတို့သကလစ်များရရှိနိုင်စေမည် လွန်စွာလိုလားသော ဆက်စပ်မှုတွေထုတ်လုပ်မှုကိုပတ်ဝန်းကျင်။
အထူးသဖြင့်အင်ဂျင်နီယာပြည်ပ Operations, တန်ဖိုးထားသည်, - Hervé Friquet, စီမံကိန်းမန်နေဂျာ အလုပ်လုပ်နှစ်သိမ့် အသုံးပြုသူများကမ်းလှမ်း:
"ဒါရိုက်တာ Woody in2it တစ်ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် - ဖော်ရွေ user interface ကို, multiprocessing, အော်တို folder ကိုသစ်ပင်ဖန်ဆင်းခြင်း လွန်စွာလိုလားသော ဆက်စပ်မှုတွေ ... "
Erwan Roth, လက်ထောက်မန်နေဂျာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာပြည်ပစစ်ဆင်ရေးအကြောင်းကထပ်ပြောသည် အဆိုပါပေါင်းစုံကို formats ၏အသိဉာဏ်အပြောင်းအလဲနဲ့ :
"ဒါရိုက်တာ Woody in2it, ကင်မရာများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကများနှင့်ခြွင်းချက် transcoding နှင့်အတူလိုက်ဖက်မှုမှကျေးဇူးတင်စကားကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ "
ဒါရိုက်တာ Woody in2it များစွာသောသတင်းရင်းမြစ် (P2, XDCAM, ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးထောက်ခံပါသည် ကို Canon, GoPro ... ) ။ ဒါဟာ Pam သို့မဟုတ်ပေးခဲ့သည်သို့ကလစ်ပ် rewraps သို့မဟုတ်မည်သည့်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံများစဖိုင်တွေ transcodes, renames အလိုအလျောက်အညွှန်းကိန်း။ ဒါဟာထိုးထွင်းသိမြင် interface ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်ခုတိကျ configuration ကိုခွင့်ပြုပါ
ဒါရိုက်တာ Woody in2it ပြီးသားပြင်သစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသည် ပြင်သစ် 24, M6 နှင့် Eurosport.
ဒါရိုက်တာ Woody in2it ဗီဒီယိုမှာ:
ဒါရိုက်တာ Woody Technologies က - ဆော့ဖျဝဲ processing ဗီဒီယိုဖိုင်များထံအပ်နှံ
ဒါရိုက်တာ Woody Technologies က, စိတ်ကူးပုံဖော်သည်ဒီဇိုင်းများနှင့်အသုံးပြုရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှု Workflows သို့ပေါင်းစည်းရန်မလွယ်ကူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် software ကိုဖြေရှင်းနည်းများ, ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ သူတို့ကသီးခြားလိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး, မီဒီယာနှင့် metadata တစ်တသမတ်တည်းအပြောင်းအလဲနဲ့ခွင့်ပြုပါ။
ဒါရိုက်တာ Woody Technologies ကအလိုတော်
IBC 2015 မှာလက်ရှိဖြစ်
2015 IBC ပြရန် avid ဆက်စပ်မှုတွေ avid ISIS အဖွဲ့ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော P2 post ကိုထုတ်လုပ်မှု Transcoding ဗီဒီယိုကိုစားသုံးမိပါ XDCam 2015-09-07
ယခင်: Transvideo နှင့် Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသစ်များကြေညာခြင်းနှင့် IBC 30 မှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု 2015 နှစ်ပေါင်းဆင်နွှဲ
နောက်တစ်ခု: Transvideo IBC2015 မှာ StarliteRF လွှတ်တင်နှင့် StarliteHD5"အိုအယ်လ်အီးဒီမော်နီတာ၏ဖွင့်ထားတဲ့အထင်ကြီးလိုင်းလက်ဆောင်ရိုက်ကူးရေးနှင့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူပူးပေါင်းထံမှထွက်ပေါ်လာသော